Xiireey Muxudiin Cumar oo ka tanaasulay Kursi uu u tartami lahaa * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xiireey Muxudiin Cumar oo ka tanaasulay Kursi uu u tartami lahaa
By Ardaan Yare	 On Sep 4, 2018
Doorashada kuriga ka banaan golaha Shacabka Soomaaliya ayaa waxa ay goordhow a bilaabatay Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Gobolka Galgaduud.
Waxaa doorashada ku tartamaya Agaasimihii hore ee NISA Cabdullaahi Gaafoow Maxamuud iyo Guddoomiyihii hore ee degmada Deyniile Xiireey Muxudiin Cumar,balse inta aysan Codeynta bilaaban ayaa waxaa tanaasulad sameeyay Xiireey Muxudiin Cumar oo la tartamayay Cabdullaahi Gaafoow Maxamuud.
Xaliimo Yareey oo ah Guddoomiyaha Guddiga doorashada qaranka oo madasha doorashada soo istaagtay ayaa waxa ay sheegay in ay doorashada dhaceyso, codna lagu kala bixi doono,iyado la raacayo habraaca Doorashada,sida ay ku dhawaaqday Xaliimo Yareey.
Goobta ay doorashada ka socoto ayaa waxaa ku sugan mas’uuliyiin kala duwan oo ay qeyb ka yihiin Guddiga doorashooyinka Qaranka Siyaasiyiin ,Madax ka tirsan Galmudug,iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan Dhuusamareeb.
Shirka Golaha Iskaashiga ee dowlad Goboleedyada dalka oo maanta Furmayo
Doorasho ka dhacday Dhuusamareeb oo ku guuleystay Cabdullaahi Gaafoow Maxamuud